UNDUNANKULU UTHI BAZOHOLWA NGONDLUNKULU KOLOMKHULEKO WESILO - Ilanga News
Home Izindaba UNDUNANKULU UTHI BAZOHOLWA NGONDLUNKULU KOLOMKHULEKO WESILO
UNDUNANKULU UTHI BAZOHOLWA NGONDLUNKULU KOLOMKHULEKO WESILO
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala.
UPHUMELE obala uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, wathi bazoweseka umthandazo wokukhumbula iSilo uZwelithini kaBhekuzulu (uMdlokombana) ohlelwa ngondlunkulu baso ukuba ngoMgqibelo, KwaNongoma. UMnu Zikalala ubekhuluma esigcawini sabezindaba ebesisemahhovisi oMnyango wezeMisebenzi yoMphakathi, eMayville, eThekwini izolo ngalo mcimbi okungaziwa ukuthi uzokuba kusiphi isigodlo njengoba usuphenduke ibhola lomnqakiswano. Uthi bewuhulumeni bacelwa ngondlunkulu bakaMdlokombana njengabahleli balo mthandazo bavuma ukufaka isandla.
“Thina njengohulumeni, sizolandela abakushoyo, uma bethi kuzohlanganwa KwaKhangela isigodlo), sizobeseka siye khona, noma ngabe bathi yiKwaKhethomthandayo, sizoya. Konke kulele kubona, uma bedinga usizo lwemali, sizokhuluma nabo sibone ukuthi singasiza kanjani,” kusho uMnu Zikalala. Ukhuluma kanje nje, ubephendula emuva kokuba uNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ekhiphe isitatimende ethi yize lo mkhuleko sekuvele ukuthi uzokuba KwaKhethomthandayo, abantwana basendlunkulu baveze ukuthi bekufanele wenzelwe esigodlweni sakhe uMdlokombana, okuyiKwaKhangelamankengane.
“Bathi kwenzeka iphutha isidumbu senkosi salandwa sayiswa KwaKhethomthandayo, ngakhoke ngeke bavume iphutha liziphinde noma sekwenziwa umkhuleko wokuyikhumbula. “Uma uzoba KwaKhetha, iSilo uMisuzulu kaZwelithini kaBhekuzulu ngeke siye kulo mkhuleko ngoba amazinyane ongodadewabo asithuka emuva kokuphuma kwesinqumo senkantolo esithi iSilo Misuzulu yisona okufanele sihlale esihlalweni,” kusho isitatimende. UMntwana uThulani Zulu okhulumela iSilo Misuzulu, uthi kuze kube yimanje kabakazi ukuthi lo mkhuleko uzokuba kuphi njengoba kunokuphikisana ngezigodlo.
“Bengingakezwa noma iSilo sizoya yini noma cha,” kusho yena. UMnu Zikalala kulesi sigcawu, uphinde wakhuluma ngezinhlelo zokuthuthukisa umnotho okubalwa ukuvulwa kwemboni yokutshala insangu, athi izodala inqwaba yamathuba emisebenzi, ukuvulwa kwehhotela KwaDukuza nemboni ezokwakha ogandaganda. Uthe basezingxoxweni zokuthi kuvumeleke abalandeli ukuhambela imidlalo ezinkundleni njengoba bekwenzeka ngaphambi kokubheduka kweCovid-19. Uthe ukugcotshwa kweSilo kuzokwenziwa emuva kokuba uMengameli Cyril Ramaphosa eseqede zonke izinhlelo ezithintekayo ezisilele ngakuyena.
Previous articleUKHALA NGAMAPHOYISA ‘AMQHATHE’ NOMAKHELWANE
Next articleISilo sibonge ukubambisanangesikhathi ebesinzima kuZulu